Plex Review ho an'ny Apple TV. Ny famakiam-boky multimedia anao. | Vaovao IPhone
Izy io dia iray amin'ireo fampiharana andrasana indrindra amin'ny Apple TV ary tsy diso fanantenana izy, na noho ny hafainganan'ny hafainganan'ny mpamorona azy aorian'ny nanombohan'ny Apple TV vaovao na koa noho ny tombotsoan'ny ity fampiharana mahafinaritra ity handefasana ny atiny multimedia. Plex dia misy ao amin'ny App Store an'ny Apple TV vaovao ary nosedraina izahay hampiseho aminao izay azon'ity fampiharana ity atolotra anay, iray amin'ireo ankafizin'ireo tia horonantsary sy andian-tantara, ary ho hitanao ny antony, ao anatin'izany ny horonantsary iray amin'ny ilay ho hitanao miasa.
Araka ny fantatry ny ankamaroanao, Tsy azo atao ny mampifandray karazana fitehirizana ivelany amin'ny Apple TV, satria na dia misy fifandraisana USB-C aza izy io dia mamerina azy io fotsiny na amin'ny serivisy teknika. Midika izany fa melohina isika hampiasa atiny amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fampiharana toa ny magazay an'i Apple miaraka amin'ny sarimihetsika sy andian-dahatsoratra, na hafa toa an'i Netflix. Plex dia mahavita mandingana ireo fetra ireo ary manao izany koa miaraka amin'ny miavaka.
Misaotra an'i Plex izahay afaka mahita ny tranomboky multimedia amin'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny Apple TV vaovao. Ny tranombokintsika dia mety amin'ny solosaintsika na amin'ny NAS, ary amin'ireo fitaovana ireo dia tsy maintsy apetratsika ny Plex Server, fampiharana maimaim-poana izay tompon'andraikitra amin'ny famandrihana ny tranombokintsika, ny fisintomana ny fampahalalana rehetra azo atao amin'ny Internet, ary ny famoronana mpizara izay ampifandraisin'ny fampiharana Apple TV Plex, mamela ny famoahana izay atiny ao amin'ilay tranomboky amin'ny fahitalaviantsika, Kalitao FullHD (miankina amin'ny horonantsary voalohany, mazava ho azy). Te hahita ny fomba fiasan'izy ireo ve ianao? Avelako ho anao ilay horonan-tsary.
Araka ny hitanao dia tsy fampiharana tsotra mamela anao hilalao horonantsary izy io, fa mamorona trano famakiam-boky miaraka amina endrika mahavariana ihany koa miaraka amin'ny karazana pitsopitsony izay tsy misy ilana fitsiriritana ny magazay multimedia an'i Apple. Miaraka amin'ny fanohanan'ny dikanteny sy ny fiteny samihafa ary ny mety hilalaovana an'ity atiny ity ivelan'ny tambajotranay eo an-toerana (na dia mila kaonty misy karama aza izany) fisoratana kely no afaka manakaiky izay atolotry Plex antsika.
Ny maha-zava-dehibe an'ity fampiharana ity dia ny hoe ny zavatra rehetra dia vita amin'ny fomba tsotra. Zara raha misy ny masontsivana roa hanamboarana azy satria saika ny zava-drehetra dia vita ho azy eo amin'ny haavon'ny mpizara. Eny, zava-dehibe ny manamboatra ao amin'ny Plex Settings ao anatin'ny Apple TV mihitsy ny kalitaon'ny streaming video na eo amin'ny tamba-jotra eo an-toerana sy ivelan'io (miaraka amin'ny kaonty Premium). Ilaina ihany koa ny fananana router tsara sy famantarana amin'ny Internet tsara mba handefasana horonantsary mavesatra indrindra raha mampiasa WiFi isika, toa ahy.
Maimaimpoana ny fampiharana Plex ao amin'ny App Store ho an'ny iPhone sy iPad, izay ahafahanao manao toy izany koa amin'ny Apple TV, na misintona ny atiny aza hijerena azy ivelan'ny Internet. Fa raha te hiasa tanteraka dia tsy maintsy mandoa vola 4,99 € ianao, ary manana ny safidinao amin'ny fisoratana anarana kaonty Premium (Plex Pass) amin'ny € 4,99 isam-bolana fa ilaina fotsiny izany hidirana amin'ny atiny ivelan'ny tamba-jotra eo an-toerana. Raha manana ny rindranasa karama amin'ny iPhone na iPad anao ianao, dia mandeha ihany koa ho an'ny Apple TV.
Ary tsy afaka manadino ireo fiasa hafa toa isika ny fahaizana manampy fantsona amin'ny fampiharanaNa dia tsy dia mampiasa firy aza ny ankamaroan'ny manamboninahitra any Espana, saingy misy fantsona "fanao" marobe azonao sintonina sy apetrakao amin'ny Apple TV-nao. Saingy io no ho anton'ny lahatsoratra iray hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Plex Review ho an'ny Apple TV. Ny famakiam-boky multimedia anao.
Misaotra amin'ny vaovao sy mampiseho fampisehoana. Tena ilaina.
Eny, izao ianao izao mila manao famerenana fotsiny hoe inona no ho lasa lamaody ankehitriny ary olom-bitsy vitsivitsy monja no nanana, ny olana NAS, izay atolotra ny vidiny sy ny fahaizany mba tsy hamelana ny solosainao, satria na ny mora indrindra aza dia mivoaka ho tampon'isa.
Zavatra iray ao an-tsaiko io, saingy araka ny filazanao azy dia fampiasam-bola lehibe izay mendrika handany fotoana kely hanapahana hevitra. Saingy manana izany ao amin'ny lisitra nataoko aho.
iPad vaovao dia hoy izy:
Salama e! Manantena aho fa afaka manampy ahy amin'ny fanontaniako ianao… Manana Plex amin'ny NAS aho ary manana Plex Pass koa. Mizara kaonty amin'ny rahalahiko aho ary ny fanontaniako dia hoe afaka miditra lavitra amin'ny kaonty ve izy sa tsia. Ary raha azontsika atao ny mampiasa azy roa miaraka amin'ny rakitra samihafa.
Mamaly amin'ny iPad vaovao
Afaka mampiasa azy raha, miaraka amin'izay ... tsy haiko intsony.
Tranonkala hijerena sarimihetsika an-tserasera amin'ny iPhone
Fampiharana "mode panic" an'ny pataloha Apple ho an'ny Touch ID